ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण मलेसियाबाट ३४ नेपाली फर्काइए, अन्यत्र पनि उच्च सतर्कता - jagritikhabar.com
ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण मलेसियाबाट ३४ नेपाली फर्काइए, अन्यत्र पनि उच्च सतर्कता
नेपालबाट मलेसिया हुँदै जापान जानका निम्ति क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट बनाएका ३४ नेपाली फर्काइएका छन् । जापानले कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गरेकोे थियोे । उडान सम्बन्धी नियमहरुमा परिवर्तन गरिएको कारण जापान जान रोकिएका ३६ नेपालीमध्ये ३४ जना नेपाल फर्किएको र २ जना मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको पहलमा जापान जान पाएका छन् ।
नेपाल फर्काइएकाहरु हिमालय एयरलाइन्स र मालिन्दो एयरलाइन्सबाट काठमाडौं आइपुग्ने श्रम सहचारी प्रकाश पन्थीले बताए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसिया ट्रान्जिट भई यात्रा गर्ने सबैलाई गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा पछिल्लो नियमहरुको जानकारी राखेर मात्र यात्रा गर्न र मलेसिया ट्रान्जिटका क्रममा केही समस्या भएमा दूतावासको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेकोे छ ।
दक्षिण अफ्रिका हुँदै कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्ट संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा फैलँदै गएको छ । हालसम्म नेपाली कामदार कार्यरत मलेसिया, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरुमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमित फेला परेपछि यात्रामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । मलेसियाले २६ मुलुक र यूएईले ७ वटा देशबाट आउन बन्देज लगाएको छ ।
कहिले खुल्छ मलेसियाको रोजगारी ? यस्तो छ नयाँ सूचना !
कोरोना महामारीका कारण लगातार २० महिनादेखि नेपालीलाई मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने ढोका बन्द छ । कम्पनीको अनुरोधमा मलेसियन सरकारको अध्यागनबाट विशेष अनुमति पाएका सीमित श्रमिकबाहेक अन्य नेपाली मलेसियामा रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् । कुनै समय नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसिया अहिले ‘बन्द’ गन्तव्य बन्न पुगेको छ ।
खाडीका देशहरुले पूर्ण वा आंशिक रुपमा श्रमिक लिन थाले पनि मलेसिया बन्द हुँदा थुप्रै श्रमिक मर्कामा परेका छन् । मलेसियाको यही नीतिका कारण कतिपय श्रमिक मलेसियाबाट फर्किन पनि सकेका छैनन् ।
मलेसियाको नेपाली दूतावासबाट हालसालै फर्किएका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार सन् २०१५ ताका मलेसियामा करिब ७ लाख नेपाली श्रमिक (वैध तथा अवैध) कार्यरत थिए । तर, अहिले त्यो संख्या करिब २ लाखमा झरेको पाण्डेको अनुमान छ ।
उनका अनुसार महामारी नियन्त्रणका लागि मलेसियन सरकारले लिएको नीतिका कारणले श्रमिकहरु मलेसिया जान नपाएका हुन् । अब महामारी साम्य हुँदै गए मलेसिया खुल्न धेरै समय नलाग्ने उनी बताउँछन् ।
महामारीअघि पनि मलेसियाको रोजगारीमा उल्झनमा थियो । मलेसियाको रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट मेडिकल, भिसा सहजीकरण, भीएलएन, वायोमेट्रिकलगायतका नाममा अतिरिक्त शुल्कसहित लादिएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले १२ जेठ, २०७५ बाट श्रमिक पठाउन बन्द गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाउँदै श्रम स्वीकृति रोकेपछि मलेसियन सरकार श्रम समझदारीका लागि सम्वादमा आएको थियो ।
त्यसकै आधारमा मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी ११ कात्तिक २०७५मा मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भयो । तर मलेसियाले पुराना भेन्डरमार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन चाह्यो भने नेपालले त्यसमा सहमति जनाएन । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिनासम्म रोजगारीमा नलगेपछि सरकारमाथि म्यानपावर व्यवसायीले नै दबाव बढाएका थिए ।
श्रम स्वीकृति बन्द भएको १५ महिनापछि २९ भदौ, २०७६ मा मात्रै मलेसियामा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति पाउन थालेका थिए । तर, करिब ५५ हजार नेपाली मलेसिया पुग्न नपाउँदै कोरोनाको महामारी शुरु भयो र फेरि मलेसियाको रोजगारीको ढोका बन्द भयो ।
मलेसियाले कहिलेबाट नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी खुला गर्छ भन्ने निश्चित अहिलेसम्म नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बताउँछ । ‘अहिलेसम्म मलेसियामा रोजारीका लागि विदेशी श्रमिक लिनेबारे निर्णय भएको जानकारी छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने । प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएअनुसार मलेसियामा नेपालीलाई प्रवेश दिलाउन क्वालालम्पुरथित नेपाली दूतावासले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।
‘जनवरीबाट खुल्न सक्छ’
पूर्वराजदूत पाण्डे भने विदेशी श्रमिकका लागि छिट्टै मलेसिया खुला हुने बताउँछन् । ‘मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले सरकारलाई श्रमिक अभावले अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भन्दै खुला गर्न दबाव बढाएका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अब धेरै समय मलेसियाको रोजगारी बन्द अवस्थामा रहन सक्दैन ।’
उनका अनुसार मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग हुने क्षेत्रमा श्रमिको अभाव चर्किएको छ । यही कारण पनि अब लामो समयसम्म मलेसियाले विदेशी श्रमिक नलगी बस्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘सम्भवतः जनवरीबाट मलेसियामा विदेशी श्रमिक जान पाउनसक्छन्,’ उनले अनुमान गरे, ‘यदि खुल्यो भने एक वर्षभित्र करिब २ लाख नेपाली मलेसिया जान पाउँछन् ।
मलेसियामा सुरक्षा गार्डका रुपमा मलेसियन नागरिक र नेपाली नागरिकले मात्रै काम गर्न पाउँछन् । तर, धेरै श्रमिक करार अवधि सकाएर नेपाल फर्किएकाले सुरक्षाको क्षेत्रमा श्रमिक अभाव भइसकेको पाण्डेले बताए । ‘सेक्युरिटी गार्डमा त नेपाली श्रमिकको मोनोपोली नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि मलेसियाले ढिलो चाँडो रोजगारी खोल्नै पर्छ ।
पूर्वराजदूत पाण्डे अब मलेसियमा रोजगारी खुलेपछि श्रमिक नठगिने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालबाट श्रमिकलाई शून्य लागतमा मलेसिया लैजानका लागि श्रम समझदारी भएकाले त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको उनी बताउँछन् ।
कामदारलाई मलेसिया लैजाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने गरी भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले बलियो अनुगमन गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘सकेसम्म आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सके बेस हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो सकिँदैन भने पनि महिनाको ३५ हजार कमाउन जाने श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ ।
मलेसियासँग भएको सम्झौता अनुसार मेडिकलमा भएको खर्च पनि पहिलो महिनाको तलब दिने समयमा कम्पनीले फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयन पनि फितलो हुनसक्ने भएकाले सरोकारवाला पक्षले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।